Shir Looga Hadlay Xuquuqul Insaanka Somaligalbeed
Buluugleey, Monday, September 12, 2005
Shir xuquuqul insaanka somaligalbeed ku saabsan oo lagu qabtay Minissota Shir si hufan aadna u cilmiyeysan loo soo abaabulay oo ay ka qayb qaateen iskuna soo duba rideen rururo kala duwan socdayna laba maalmood oo kala ahaa 3di iyo 4ti bishan Sibteembar ayaa lagu qabtay magaalada Minneapolis ee Gobolka Minisoota dalka Maraykanka. Shirkan oo u jeedadiisu ahayd mid lagaga hadlayey dhibaatooyinka uu Guumaysiga Itoobiya ku hayo Shacbiga Soomaalida somaligalbeed ee dhinacyada gefafka xad-dhaafka ah ee ku xadgudubka Xuquuqal Iinsaanka, Nololxumada, Horumarla’aanta, Waxbarasha la’aanta, Caafimaad la’aanta, iyo guud ahaan dhibaatooyinka ka jira somaligalbeed ayaa sidii loogu talagalay guul ku dhamaaday.
Shirka waxaa ka soo qayb galay dad boqolaal gaadhayey oo isugu jiray Madax Sare oo ka tirsan Masuuliyiinta Gobolka Minnesota oo ay ka mid ahaayeen; Afhayeenka Baarlamaanka Gobolka Minnesota Mudane Steve Sviggum, Senator Mark Kennedy, oo dhamaantood qudbado aad loogu bogay oo ku wajahan Qadiyada somaligalbeed iyo doorasho ku sheegti dhawaan Itoobiya iyo somaligalbeed ka dhacday ka soo jeediyey goobti shirka.
Waxaa iyana ka soo qayb galay Jaaliyadaha Minnsota ee Afrikada Bari, Aqoonyahano, Ururada Gobanimadoonka ah sida Oromada oo wafti uu Hogaaminayey Madaxa Arimaha Dibada ee Ururka Xoraynta Oromia Mudane Xasan ay ka soo qayb galeen, wufuud ka kala timid Jaaliyadaha somaligalbeed ee ku nool Dalka Kanada, Magaalada Chicago ee Gobolka Ilinois, Masuuri Kansas, Atlaanta Georgia, Denver Colorado, iyo Gobolo kala duwan oo Dalka Maraykanka tirsan.
Dadka qudbadaha kala duwan shirkaas ka soo jeediyey waxaa ka mid ahayd; Dr. Fawsiya Cabdiqaadir oo ah Madaxa Ururka Xuquuqal Iinsaanka somaligalbeed oo ka hadashay xaalada dhaqaale iyo tan nololeed ee shacabka Soomaaligalbeed, gaar ahaan xaaladaha ay ku sugan yihiin haweenka Soomaalidagalbeed.
Hodan Ducaale oo ka tirsan Ururka Isu-taga Haweenka somaligalbeed ee dalka ayaa iyaduna ka hadashay dhibaatooyinka uu Guumaysiga Abasiiniya ku hayo shacbiga Soomaaligalbeed ee isugu jirta dilka, dhaca, xadhiga, kufsiga, iyo cunaqabataynta shacbiga.
Dr. Maxamed Xasan Cali ayaa isaguna si qoto-dheer uga hadlay Qadiyada Shucuubta somaligalbeed iyo Oromiya oo taariikhdooda si wayn u falanqeeyay.
Dr. Keith Jennings oo ka socday Ururka Xuquuqal Iinsaanka Afrikaanka Maraykanka ah ayaa isna ka hadlay sida ay lagama maarmaanka u tahay la dagaalanka guumaysiga iyo ku xadgudubka xuquuqda aadamaha. Helen Butler oo ka socotay Ururka Isbahaysiga Qorshaha Dadka yaa iyaduna ka hadashay sida ay lagama maarmaanka u tahay gacan siinta Shacbiga Dulmiga Abasiiniya ku jira ee Soomaaligalbeed , ballana ku qaaday in Ururkeedu u garab istaagi doono Shacbiga dulma ee somaligalbeed.
Waxaa kaloo shirkaas laga akhriyay qoraallo ka kala yimid Madax Sare oo ka tirsan Dalka Maraykanka oo lagu martiqaaday, hase yeeshee duruufo shaqo awgood aysan u suurta galin inay ka soo qayb galaan, ka dibna wakiilo waraaqahooda ka akhriya soo dirsday. Dadkaas waxaan ka xusaynaa; Senator Colman oo ka tirsan Golaha Odayaasha Dalka Maraykanka ahna xubin ka tirsan Gudiga Xidhiidhka Caalamka ee Dalka Maraykanka, Madaxa Gobolka Minnesota Governor Tim Pawlenty, iyo Jesse Jackson oo ah Hogaamiyaha Ururka ugu wayn dalkan Maraykanka ee u ololeeya Xuquuqda Dadka Madow ee Dalkan Maraykanka Magaciisana la yidhaahdo Rainbow Coalition. Dhamaan qoraaladaas ayaa muujinayey sida ay taageero ugu hayaan shacbiga dulman ee Soomaaligalbeed ee Guumaysiga Abasiinaya ku hoos jira.
Sidoo kale, madaxdaas waxay qoraaladooda ku muujiyeen sida ay uga xun yihiin dhibaatada Itoobiya ay ku hayso Shacbiga Soomaaligalbeed. Waxayna ballanqaadeen inay si joogta ah ula socon doonaan xaaladda Shacbiga dulman, isla markaana ay ku dadaali doonaan sidi ay wax uga qaban lahaayeen.
Gabagabadiina waxaa isu hadhay Ururo bulsheedyada Soomaaligalbeed oo si cilmiyeysan uga dooday sii xoojinta wada shaqayntooda mustaqbalka, iyo kor u qaadida hawlahooda ku wajahan u Halganka Qadiyada Soomaaligalbeed.